TomàsBigordà | | ပင်လယ်ရေစွမ်းအင်, Wave စွမ်းအင်, ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်
တကယ်တော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာမှကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိသည် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်။ ကံမကောင်းစွာပဲဒီအကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရခြင်းမရှိပါ။
ပင်လယ်၏အဏ္ဏဝါစွမ်းအင်သို့မဟုတ်စွမ်းအင်သည် ကွဲပြားခြားနားသောဇာစ်မြစ်လှိုင်းတံပိုးများ၊ ဒီရေများ၊ သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းများ၊ အပူချိန်နှင့်ဆားငန်граဒီဂရီများကဲ့သို့သော။
ဒီအပိုင်းကိုပင်လယ်ထဲမှာတည်ရှိပြီးလေတပ်ဆင်ခြင်း၊ အဏ္ဏဝါဇီဝလောင်စာများအသုံးပြုခြင်းစတဲ့အုပ်စုများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ပြင်ပမှာဖြစ်လိမ့်မည် သူတို့ဆားငန်ထု၏သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုမဟုတ်ကတည်းက။
1.4 ဆား gradients
ယေဘုယျအားဖြင့်လည်း "ဟုခေါ်တွင်လှိုင်းမော်တာ“ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိဆုံးသောနည်းပညာနှင့်မတူကွဲပြားသောနည်းပညာများသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္theတွင်ကြီးမားသောစိတ်ဝင်စားမှုကိုပြသသည်။
Wave စွမ်းအင်ကိုသမုဒ္ဒရာစွမ်းအင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသမုဒ္ဒရာနှင့်သမုဒ္ဒရာများ၏လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့် kinetic စွမ်းအင်ကိုရယူခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။
လှိုင်းများသည်လေ၏သက်ရောက်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည် ရေမျက်နှာပြင်။ ဤလေသည်ကမ္ဘာ၏အဓိကစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သောနေမှစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ သမုဒ္ဒရာရေများ၏လှိုရွေ့လျားမှုတွင်ပါရှိသောစွမ်းအင်သည်အလွန်ကြီးမားသည်။ လှိုင်းလှုပ်ရှားမှုပေါများသည့်နေရာအချို့တွင်ဤလှုပ်ရှားမှုတွင်သိုလှောင်ထားသော kinetic စွမ်းအင်သည် 70MW / km2 ထက်ကျော်လွန်သည်။
ဒါ့အပြင်လူသိများ "ဒီရေနေနှင့်လ၏မြေထုဆွဲအားလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပင်လယ်ရေမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချခြင်းသည်စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသန့်ရှင်းစွာထုတ်လုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သမုဒ္ဒရာတွင်ထုတ်လုပ်သောဒီရေစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စတွင်အဓိကအားနည်းချက်မှာအမြင့်နှင့်ကွာခြားမှုရှိသောနေရာများ၏နေရာသည်အလုံအလောက်ကြီးမားသည် အမြတ်ရလိမ့်မည် စက်ရုံလည်ပတ်ရန်ရှုထောစီးပွားရေးအချက်အနေဖြင့်။
အ သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်းများ ဤရွေ့ကားနက်ရှိုင်းသောဒေသများမှရေ kinetic အသုံးပြုမှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ်အဏ္ဏဝါထုတွင်ပေါ်ပေါက်သောဖြစ်ရပ်ဖြစ်ကြသည်။
လေကိုဖြစ်ပေါ်စေသောရေ၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းသည်ရေတိုးလာသည်နှင့်အမျှပြင်းထန်မှုနည်းသည်။ အတိမ်အနက်ကို.
တစ်ဖက်တွင်အီကွေတာ (သို့မဟုတ်) အပူပိုင်းဒေသတွင်တည်ရှိသည့်နေရာများတွင်နည်းပညာပိုင်းဖြင့်သယ်ဆောင်နိုင်သောမျက်နှာပြင်ရေထုနှင့်နက်ရှိုင်းသောအပူချိန်ကွာခြားချက်၊ အထူးသဖြင့်တလျှောက်အပူချိန်တလျှောက်တွင်အပူချိန်အဆက်မပြတ်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး.
ဆားငန် gradients သည်ဆားငန်မှုအမျိုးမျိုးရှိသောရေအမျိုးအစားများစုစည်းသောနေရာများတွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မြစ်၏ခံတွင်း၌ဖြစ်ပျက်။
၎င်းသည်လှိုင်းများ၏စွမ်းအင်ကိုပိုမိုအဆင့်မြင့်သောအရာဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ဆိုလိုသည်မှာ ဒီရေစွမ်းအင် ၎င်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသိသိသာသာအသုံးမပြုဘဲအထူးအခြေအနေများရှိသောအချို့နေရာများတွင်သာအသုံးပြုခြင်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး၎င်းတို့သည်ထူးခြားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖိုးရှိသည့်နေရာများဖြစ်သည်။
သမုဒ္ဒရာလက်ရှိအရင်းအမြစ်များရှိသောဒေသများရှိပြproblemနာသည်နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ကြီးမားသည် အသွားအလာသိပ်သည်းဆ placesရိယာအလုံအလောက်ရှိသော်လည်းပြproblemနာသည်အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။
လက်ရှိအဏ္ဏဝါ gradients ၏အသုံးပြုမှုကို, အမြတ်မရှိဘူး သို့သော်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်၎င်းသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုရပ်တန့်ခဲ့သည်။
ဥရောပသည်လှိုင်းများအသုံးပြုခြင်းတွင်အထူးရှေ့ဆောင်ဒေသဖြစ်သည် စကော့တလန် y ပေါ်တူဂီနောက်ပိုင်းတွင်အခြားနိုင်ငံများမှာထည့်သွင်းခဲ့ကြပေမယ့် Espanaအဓိကအားဖြင့် Cantabrian ကမ်းရိုးတန်းရှိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများနှင့် Galicia တို့ဖြစ်သည်။
ယနေ့အထိစတင်ခဲ့သည့်စီမံကိန်းများစွာသည်ရလဒ်များနှင့်ကွဲပြားသော်လည်းရလဒ်ကောင်းများရရှိရန်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအမျိုးမျိုး၏ခိုင်မာသောအထောက်အပံ့များရှိသည် ဒီကဏ္ sector။ ထို့အပြင်အလယ်အလတ်ကာလအောင်မြင်မှုအတွက်နိဒါန်းတစ်ခုဖြစ်သောကြီးမားသောပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစက်မှုလုပ်ငန်းမှကြီးမားသောစိတ် ၀ င်စားမှုရှိပါသည်။ တိုင်းပြည်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရောနှောခြင်းတွင်တစ်ဖန်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုအားကိုးနိုင်ခြင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » Wave စွမ်းအင် » အဏ္ဏဝါစွမ်းအင်သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုထုတ်ပေးသည်